कस्तो छ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी ? – Nepal News
कस्तो छ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी ?
काठमाडौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी तीब्रस्तरमा शुरु भएको छ ।
भ्रमणको मिति तय भइ नसकेपनि चीनसँग यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयनका पक्षमा र केही नयाँ सम्झौता गर्ने गरी तयारी भइरहेको हो ।
सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओली असारको पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय हुनसक्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा दक्षिण एशियाली आर्थिक र सामरिक कुटनीतिका दृष्टिले नेपाललाई रणनीतिक महत्वको क्षेत्रका रुपमा चीनले लिँदै आएको छ । सोहीस्तरमा चीनसँगको सम्बन्ध समेत विगत भन्दा थप राजनीतिक हुँदै आएको देखिन्छ ।
विगतमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणपछि चीनसँगको सम्बन्धमा नाटकीय परिवर्तन देखिएको हो । त्यतिखेर प्रचण्डले चीन र भारतको विकासबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्ने बताउँदै वान बेल्ट वान रोडको अवधारणामा नेपालले सहजिकरण गर्नसक्ने बताएका थिए । यद्यपी वान बेल्न वान रोड (ओबिआर)मा भारतले अहिलेसम्म नीतिगत सहमति जनाएको छैन ।
यसपटकको भेटघाटमा ओबिआरका बारेमा नेपालले ठोस प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको परराष्ट्र श्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारेमा छलफल शुरु गरिसकेको र छिट्टै औपचारिक खाकाबारे चिनियाँ पक्षसँग संवाद हुने समेत श्रोतले जनायो ।
प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणमा पुराना सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगतिको समीक्षासँगै त्यसलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउने विषयमा कुरा हुने श्रोतले बतायो । योसँगै चीनसँग जोडिएका नाका, केही नयाँ नाका खोल्ने र व्यापार सम्झौता अहिलेको भ्रमणको मुख्य विषय हुनसक्ने देखिन्छन् । यद्यपी भारतसँगको राजनीतिक र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती भने सरकारको रहेको छ ।
भ्रमणको तयारीकै लागि केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए । ओलीको आगामी चीन भ्रमणमा चिनियाँ नाका नजिक सुक्खा बन्दरगाह समेत निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाउनेछ । नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिका लागि बन्दरगाह निर्माणलाई समेत जोड दिने भएको छ ।
यस्तै, तातोपानीमा निर्माणाधीन बन्दरगाहलाई ठूलो बनाउने र रसुवागढीको टिमुरे तथा कोरला जोड्ने नाकामा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपालले प्रस्ताव गर्नेछ । तातोपानी नजिकै निर्माणाधीन लार्चा सुक्खा बन्दरगाह ठूलो बनाउन चिनियाँ पक्ष सहमत भए पनि त्यसमा खासै चासो नदेखिएको कान्तिपुर दैनिकले जनाएको छ ।
नेपालले चीनसँग यातायात सञ्जाल, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जनस्तरको सम्बन्ध विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नै छलफल अघि बढाउने बताइसकेको छ । स्वतन्त्र ब्यापार क्षेत्रको सम्भाव्य अध्ययन, सीमामा चिनियाँ बजार विस्तार र नेपालीलाई सहज पहुँच, चीनको लगानीमा अघि बढेका परियोजना पूर्ण गराउन अध्ययन संयन्त्र लगायतका विषय नै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा प्रवेश पाउनेछ ।
आवरण तस्वीर रिपब्लिका दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
ट्याग्स: China, KP oli, OBOR